फिडियनको भविष्य हातले थ्रीडी प्रिन्टि withसँग | क्रिएटिव अनलाइन
मेलिसा पेरोटा | | सामान्य, प्रेरणा, टेक्नोलजीज
हामी हाल यस युगमा बाँचिरहेका छौं जहाँ प्राविधिक प्रगतिहरू तीव्र गतिमा, कम लागत र अधिक पहुँचका साथ द्रुत गतिमा हुँदैछ। यो अवधिलाई «तेस्रो औद्योगिक क्रान्ति भनिन्छ, उनीहरूले भोगेका सामग्री र उत्पादन प्रक्रियामा परिवर्तनको साक्षी हो। यसरी, ब्रान्डले उनीहरूको उत्पादन क्षितिज फराकिलो गर्न अनुमति दिदै व्यवसायिक अवधारणालाई विविधीकरण गरिएको छ।
एक क्षेत्र जुन धेरै भएको छ यो परिवर्तनबाट प्रभावित फेसन उद्योग हो; त्यो अहिले सम्म काटने र मोल्डिंग मा आधारित एक उत्पादन प्रक्रिया बनाए। को विकास र थ्रीडी प्रिन्टि technology टेक्नोलोजीको परिष्कृत, अधिक राम्रोसँग "योजक निर्माण" भनिन्छ; अधिक रचनात्मक र नवीन परियोजनाहरू विकास गर्न कपडाका ब्रान्डहरूलाई सक्षम बनाएको छ।
डिजाइनरहरू २०१० देखि यस प्रविधि प्रयोग गर्दै आएका छन्। यद्यपि केवल सफ्टवेयर विकास गर्न सम्भव भएको छ जसले परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ जटिल विवरण र राम्रो फिलामेन्ट गुणवत्ता.
वास्तविकता यो हो कि यसको परिष्कारले अधिक र अधिक क्षमताहरू उत्पन्न गर्दछ, जुन डिजाइन सम्भावनाहरूको क्षितिज विस्तार गर्नुहोस्। यस तरिकाले तिनीहरूले चीजहरू गर्न सक्छन् जस्तै छोटो नेतृत्वको समय, अर्डरहरूलाई न्यूनतम गर्न, रचनात्मकता बढाउन वा अघिल्लो गैर-उत्पादनशील डिजाइनहरू सक्षम गर्न।
1 भविष्यमा हेर्नुहोस्
1.1 फेसन उद्योग को लागी संभावनाहरु
1.2 घरमा कस्टम मुद्रण
1.3 स्वतन्त्र डिजाइनरहरूको लागि सम्भावनाहरू
फेसन उद्योग को लागी संभावनाहरु
नाइकेको पहिलो थ्रीडी प्रिन्टि s स्नीकरको प्रोटोटाइप
थ्रीडी प्रिन्टिंगको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता यो हो द्रुत प्रोटोटाइपको लागि क्षमता। यसको मतलव डिजाइनरहरूको द्रुत नमूना वा मोल्डहरू उत्पादन गर्नका लागि हो। यस्तो तरीकाले कि उत्पादन र असेंब्ली समय घट्नेछ, नमूनाहरूको ठूलो संख्यालाई अनुमति दिदै। निश्चित रूपमा, थ्रीडी प्रिन्टिले उत्पादनको भोल्यूमलाई अविश्वसनीय गुणा गर्न मद्दत गर्दछ।
मुख्य सामग्रीको रूपमा प्लास्टिकको प्रयोगका कारण थ्रीडी प्रिन्टि the वातावरणको लागि हानिकारक छ भन्ने कुरा देखाउन बाहेक, यो व्याख्या गलत छ। वास्तवमा तपाईले यो याद गर्नुपर्दछ कि केहि दिगो हुन्छ, होईन कि यो जैव-उन्नत हो, तर किनभने यसले पारिस्थितिक, सामाजिक र आर्थिक स्थिरतालाई पूरा गर्दछ।
एडिडास थ्रीडी मुद्रित स्नीकर
यस अवस्थामा, थ्रीडी प्रिन्टिंग उत्पादन प्रक्रिया मध्ये एक हो प्रक्रियामा अधिक फोहोरको मात्रा व्यावहारिक रूपमा शून्य भएकोले यसले कम कार्बन फुटप्रिन्ट उत्पन्न गर्दछ। थप रूपमा, लगभग सबै सामग्री प्रयोग गरीन्छ र वातावरणीय वा मानव शोषण प्रयोग गरिदैन, वर्तमान फेसनमा धेरै सन्दर्भहरूले के विपरीत गर्दछ। वास्तवमा, प्रयोग गरिएको सामग्री रिसाइकल गर्न सकिन्छ र उही उत्पाद जुन सिर्जना गरिएको छ त्यो पुन: साइकल गर्न सकिन्छ।
घरमा कस्टम मुद्रण
तर के हुन्छ यदि मैले तपाईंलाई भने कि भविष्यमा थ्रीडी प्रिन्टिंगले वस्त्र निर्माण उद्योगलाई पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्न सक्दछ? यो धेरै यथार्थवादी लाग्न सक्छ, तर जब प्रविधिको बारेमा कुरा गर्दा असम्भव केहि छैन। यसको सम्बन्धमा, डिजाइनर डानिट पेलेग २०१3मा विकसित भयो पहिलो कपडा संग्रह १००% थ्रीडी प्रिन्टि .मा बनेको। उनले यसलाई संग्रहको रूपमा पनि प्रक्षेपण गरे जुन घरमा थ्रीडी प्रिन्टरहरूसँग प्रिन्ट गर्न सकिन्छ जुन कोहीले पनि प्राप्त गर्न सक्दछन्।
उसको विचारले फेसन उद्योगलाई हलचल गर्यो, किनभने त्यो नयाँ कलाकृतिबाट हामी प्राप्त गर्न सक्दछौं कपडा उत्पादन प्रक्रिया विस्थापन गर्नुहोस् जुन हामीलाई आज थाहा छ। भविष्यमा, हामी सक्छौं वेबबाट थ्रीडी मोडेलहरू डाउनलोड गर्नुहोस् "डिजिटल कपडा डिजाइनरहरू" लाई। त्यसोभए हामी तिनीहरूलाई घण्टामा मात्र चाहिने लुगाहरू प्रिन्ट गर्न सक्दछौं। र, यदि यी सबै चीजहरू एकसाथ मद्दतको उत्तम चीजसँग मिल्दछ भने, हामी पुरानो टी-शर्टमा टक लगाउन सक्दछौं र यसलाई टिकाऊ उपयोगको लागि नयाँमा परिवर्तन गर्न सक्दछौं।
यहाँ उनको संग्रह को भिडियो जाँच गर्नुहोस्:
स्वतन्त्र डिजाइनरहरूको लागि सम्भावनाहरू
कपडाको ब्रान्डमा काम गर्दा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको ठूलो संख्यामा एकाईहरू उत्पादन गर्नु आवश्यक छ। उत्पादनको यस कारक Sc स्केलको अर्थव्यवस्था of को घटना द्वारा वातानुकूलित छ। यो आर्थिक नियमले परिभाषित गर्दछ कि उत्पादनको उच्च मात्रा प्रति वस्तु मूल्य घट्छ। जसको अर्थ हो स्वतन्त्र डिजाइनरहरूले धेरै उच्च लगानीको सामना गर्नुपर्दछ यदि उनीहरू आफ्नो कपडा उत्पादन गर्ने कारखाना लिन चाहन्छन् सस्तो मूल्यमा तिनीहरूलाई बेच्न क्रम मा। तसर्थ, डिजाइनर लुगा सामान्यतया औसत स्टोर भन्दा अधिक मूल्य छ। अर्कोतर्फ, डेलिभरी समय धेरै लामो हुन्छ, किनकि सामान्यतया रसद प्रक्रिया हुन्छ।
Dita Von Teese का लागि माइकल श्मिटद्वारा थ्रीडी प्रिन्ट गरिएको पोशाक
यस अर्थमा, थ्रीडी प्रिन्टिले डिजाइनरलाई बाह्य उत्पादन एजेन्टबाट स्वतन्त्र हुने सम्भावना प्रदान गर्दछ। यस तरीकाबाट तिनीहरू आफैले आफ्नो कार्यशालाको आरामबाट, उनीहरूले चाहेको मात्रालाई परिचालन गर्न सक्दछन्। तिनीहरू कारखानाले चाहिने जस्ता विशाल न्यूनतम अर्डरहरू नगरी तिनीहरू आवश्यक पर्ने समयमा निर्माण गर्न सक्दछन्। अर्को शब्दमा, यो छिटो, अधिक कुशल र कम रसद लागत कम गर्ने सम्भाव्यता छ.
अर्कोतर्फ, यसको प्रोटोटाइपको सहजताको लागि धन्यवाद, धेरै स्वतन्त्र डिजाइनरहरू उत्पाद विचारहरू र अवधारणाहरूको परीक्षण गर्दछन्। केही खुद्रा विक्रेताहरूले यसलाई उत्पादनको मोडको रूपमा प्रयोग गर्छन् न्यूनतम तराजुमा बेचिएका उत्पादनहरूका लागि अनलाइन स्टोरहरूमा Etsy वा इन्स्टाग्राम जस्तै सोशल नेटवर्कहरूमा।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » प्रेरणा » फिडियनको भविष्य हातमा थ्रीडी प्रिन्टि .को साथ